Global Voices teny Malagasy » Samborina ireo mafana fo noho ny lahatsoratra anaty tambazotran-tserasera mitsikera ireo tetikasa mety hanimba ny lemak’i Dhofar ao Oman · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2021 3:14 GMT 1	 · Mpanoratra Gulf Center for Human Rights Nandika nirinandrea
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Oman, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra : Ity lahatsoratra ity dia nosoratana ary navoakan'ny Gulf Centre for Human Rigths , fikambanana tsy miankina, tsy mitady vola izay manosika indrindra ny fahalalahana haneho hevitra, hanorina fikambanana ary fivoriana am-pilaminana ao amin'ny faritra MENA.
Notazomina sy nenjehina ireo mpikatroka mafàna fo Omani noho ny filazan'izy ireo ny fanoherany ny fikasan'ny governemanta hanangana fampivoarana ao amin'ny Lemak'i Dhofar. Sary navoaka tao amin'ny GCHR.
Manao famoretana an'ireo mafana fo ety anaty aterineto ireo mpitandro ny filaminana Omani ao amin'ny Governoràn'i Dhofar, mafana fo izay mitsipaka ny fampandrosoana kasain'ny governora apetraka ka hanova ny faritra atsimon'i Soltana ary hamafa ny ampahany amin'ny tontolo voajanahary izay efa teo an-jato taonany maro.
Azon'ny Gulf Centre for Human Rights (GCHR) sy ny Omani Association for Human Rights (OAHR) avy amin'ny loharanom-baovao marim-pototra fa nosamborina ny Alahady 28 Febroary ilay poeta Salem Ali Al-Maashani sy Amer Musli mam Bait Saeed. Vokatry ny fampielezan-kevitry ny Internal Security Service (ISS) hisamborana ireo mafana fo izay mikatsaka ny hitehirizana ny fomba fiaina nentim-paharazana izay efa nisy an-jato taona maro ao amin'ny lemak'i Dhofar.
Misarika mpizahantany ny faritanin'i Dhofar noho ny tontolo manodidina azy mahavariana, ahitàna tany midadasika mamokatra eny an-dohasaha sy ireo tendrombohitra, eo ihany koa ny lemaka amorontsiraka toerana misy an'i Salalah, renivohim-paritany. Miaina an-kahalalahana eny amin'ireo toerana ireo ireo mpiandry rameva, tsy voahelingelin'ny fananganana an-drenivohitra.
Notoherin'ireo mpikatroka vaosambotra ireo ny drafitry ny governemanta hamindra ny fifehezana ny lemak'i Dhofar ho an'ny Ministeran'ny Trano sy Drafitra An-tanàndehibe, izay hanome alalàna ny fananganan-trano fonenana be pitsopitsony ao amin'ireny faritra maitso ireny.
Notanàna vetivety noho ny lahatsoratra Twitter navoakany i Bait Saeed ilay mafana fo, mpitantana fantsona Youtube  malaza iray mitondra ny anarana “Amr Al-7kli” izay nizara lahatsary mampiseho ny morontsiraka sy ireo toerana samihafa hampiroboana ny fizahantany ao amin'ny Governoran'i Dhofar .
Ny 13 Febroary 2021, tao amin'ny kaontiny Twitter  no nizarany :
Misy mponina afaka mankafy fetin'ny rameva nokarakaraina manokana ho azy ireo hanohanana sy handrisihana azy, ary miaraka amin'izay, etsy ankilany , misy ireo fety nofoanana ho an'ireo hafa izay tsy maintsy hamela ny famboleny sy ny tany niaviany. Mitovy ve ny zon'ny mponina eto amin'ity firenena ity ? #Transfer_Sahel_Dhofar
Ny Alatsinainy 8 Martsa, navoaka ny fonja izy taorian'ny famotsoran'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Salalah azy.
Loharano azo antoka avy ao an-toerana no nilaza fa voatazon'ny sampana manokan'ny komandin'ny polisy ao Salalah i Bait Saeed sy Al-Maashani , izay nampiantso azy ireo ary avy hatrany dia nisambotra azy ireo raha vao tonga tany izy ireo. Misolo tena manantanteraka ny baikon'ny ISS io sampana manokana io, ny fisamborana sy ny fanagadrana mafana fo no andraikitra ahafantarana azy ireo. Ireo loharano azo antoka ireo ihany koa no nanamafy fa mbola ireo sampana manokana ireo ihany koa no mbola nampiantso mafana fo maro tao amin'ny Twitter tao amin'ny faritry ny governoran'i Dhofar ka nanery azy ireo hanao sonia fanekena ny tsy handefasan'izy ireo bitsika intsony momba ilay resaka famindram-pitantanana ao amin'ny lemak'i Dhofar.
Ny volana Febroary, tao amin'ny pejiny Twitter  ilay poeta Al-Maashani no nanoratra lahatsoratra lava be nanakiana ilay governora ary nampitandrina momna izay ho vokatry ny famindrana ny fahefana mikasika ny lemak'i Dhofar. Nahitàna an'izao tao anatin'ilay izy :
#Transfering_Dhofar_Plain_Authority (Famindrana ny fahefana ao amin'ny lemak'i Dhofar) Mitsipaka io ny mponina rehetra ao Dhofar izay tsy nisy fakàna ny hevitr'izy ireo sy fanajana azy ireo fa dia napetraka fotsiny, efa nitsipaka ny fanapahan-kevitra toy izany ihany koa izy ireo teo aloha, raha tsy hilaza afa-tsy ireo didy navoaka izay nampifandona ny foko sy ny fanjakana tamin'izany fotoana, Ankehitriny, manao antso amin'i Soltana Haitham izahay ny tsy hisian'ny krizy toy izany intsony, mba #dismiss_governo_of_Dhofar (hanàla ny governorn'i Dhofar).
Ny 25 Febroary 2021, nandefa bitsika  i Al-Maashani nanipika “ny mahazava-dehibe ny fanoritana ny singa rehetra anaty fiarahamonina ary hampiditra azy ireo anaty tondrozotra mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny tanindrazana sy ny mponina.” Tao aminà bitsika  iray nozarainy ny 23 Febroary, niantso ireo manampahefana izy mba hanaja ny fahafahana haneho hevitra sy fananana hevitra, araky ny voalazan'ny andinin-dalàna faha 18, 29 sy 31 ao amin'ny Lalàna Fototry ny Fanjakana.
Tranga  sahala amin'izay ihany , notanana am-ponja ny 23 Febroary 2021 ilay mpiaro ny tontolo iainana Dr.Ahmed Issa Qatan, voampanga ho nampiasa ny filazambaovao anaty aterneto hanakorontanana ny filaminam-bahoaka. Ny 8 Martsa, navotsotra vonjimaika i Qatan, izay nanohitra ihany koa ilay fikasan'ny Governora ao amin'ny faritr'i Dhofar. Araky ny voalazan'ny biraon'ny fampanoavana ao an-tanànan'i Salalah, izay renivohi-paritanin'i Dhofar , i Dr Qatan “dia nampiasa ny Aterineto hanaparitahana zavatra heverina fa hanakorontana ny filaminam-bahoaka amin'ny fihantsiana ny olona, amin'ny fanaratsiratsiana ny ministra sy ireo mpiara-miasa aminy, amin'ny fiampangana azy ireo ho mpanao kolikoly sy mpanao fitondra-mitanila izay manaratsy ny momba azy ireo…tamin'ny alalan'ny fampiharana an-tambatrotra sosialy Twitter. ” Ny taratasy fampahafantarana navoakan'ny mpampanoa lalàna no nilaza fa “nandika lalàna noho ny fampiasany ny Aterineto hanaparitahana vaovao mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka, araka ny voalazan'ny lalàna andininy faha-19 ao amin'ny lalàna Omani momba ny heloka bevava an-tserasera ” i Qatan.
Ho fampiharana ilay andinin-dalàna 32/A, nangataka tamin'ny Fitsarana ny biraon'ny fampanoavana mba ho giazana ilay fitaovana nampiasaina nandefasana ilay bitsika, ary ho fampiharana ny andinin-dalàna 32/B amin'io lalàna io ihany dia nakatona tanteraka ilay kaonty Twitter nampiasaina.
Araky ny voalazan'ny andinin-dalàna faha 19 ao Oman mikasika ny lalànan'ny Heloka bevava an-tserasera  : “Sazy an-tranomaizina tsy latsaky ny iray volana ary tsy mihoatra ny telo taona sy onitra tsy latsaky ny arivo Rial Omani (2.601 Dolara) ary tsy mihoatra ny telo arivo Rial Omani (7.803 Dolara), na ny iray amin'ireo sazy roa ireo, ho an'izay mampiasa ireo fitaovan'ny tambajotram-baovao na ny teknolojian'ny fampahalalambaovao mba hamokarana, hamoahana, hizaràna, hividianana na Fitazonana zavatra mety hanohintohina ny soatoavina ara-pivavahana na ny filaminam-bahoaka.”
Na ny GCHR na ny OAHR, samy nanameloka tamin'ny fiteny hentitra daholo ilay fanentanana fisamborana notarihin'ny ISS hanoherana ireo mpiaro ny tontolo iainana ao amin'ny governoran'i Dhofar. Teo noho eo ihany ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona dia nanao antso avo ho an'ny ISS hamotsotra ireo mafana fo telo, Dr. Ahmed Issa Qatan, ilay poeta Salem Ali Al-Maashani ary ilay mafana fo anaty aterineto Amer Muslim Bait Saeed (Amr Al-Hkli), ka hamarana tsy misy hatak'andro ny “politika ny fampanginana ny hevitry ny hafa sy ny fikendrena ireo mpiaro ny zon'olombelona, anatin'izany ireo mpikatroka anaty aterineto.”
Nilaza avokoa ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona roa ireo fa manararaotra ny zava-misy noho ny valan'aretina Coronavirus (Covid-19) ny manampahefana Omani hanatanterahana ny drafitr'izy ireo hamindra ny fitantanana ny Lemak'i Dhofar ao anatin'ny fotoana mahasahirana ny olona eo amin'ny resaka fahasalamana sy ny fitandreman-tena. “Tokony hajain'ny fitondrana ao Oman ny fahalalahan'ny mponina, anatin'izany ny fahalalahana haneho hevitra sy hanana hevitra, anaty aterineto sy ivelany,” hoy ny voalazan’ ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/25/151805/
 Gulf Centre for Human Rigths: https://www.gc4hr.org/news/view/2622
 fantsona Youtube: https://www.youtube.com/c/%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2584%25D9%258A/videos
 kaontiny Twitter: https://twitter.com/amr_al7kli
 February 13, 2021: https://twitter.com/amr_al7kli/status/1360605987187662851?ref_src=twsrc%5Etfw
 pejiny Twitter: https://twitter.com/s_a_71
 February 12, 2021: https://twitter.com/s_a_71/status/1360279993260126212?ref_src=twsrc%5Etfw
 lalànan'ny Heloka bevava an-tserasera: https://www.moheri.gov.om/userupload/Policy/The%20Cyber%20Crime%20Law_Ar.pdf